बुहारी अञ्जनालाइ खुकुरीले छप्काउनुको कारण बल्ल खुल्यो रहस्य, जेठाजुले प्रहरीलाइ दिए यस्तो अचम्मको बयान ! «
प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०७६, शनिबार २२:११
अञ्जना लामाको ललितपुरका प्रज्वल महतसँग ६ वर्षअघि विवाह भयो। मकवानपुर स्थायी ठेगाना भएकी लामाकी छोरी ललितपुरको फराकिलो महत परिवारकी सदस्य बनेर आएकी थिईन्।
एउटा निजी कम्पनीका जागिरे प्रज्वल, अञ्जना, दाजु उज्वल, भाउजु र आमा–बुबा ललितपुर ढोलाहिटीको घरमा सगोलमै बस्थे। उज्वल ध्वनी इन्जिनियर र म्युजिक कम्पोजर थिए। परिवारका सबै सदस्यको आय राम्रै थियो।तर, केही महिनाअघिदेखि उज्वलको कानमा समस्या देखियो। उनलाई गितारमा सुर भर्न र सुर भरेका गीतलाई अन्तिम रुप दिन गाह्रो हुन थाल्यो। उनी बिस्तारै कार्यालयबाट बाहिरिए। ‘म कानको उपचार गराइरहेको छु,’ उज्वलले २२ बैशाखमा आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मैले संगीतकर्म सधैँका लागि छाडेँ।’
उनले सोही स्टाटसमा आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा केही शंकास्पद गतिविधि भइरहेको समेत उल्लेख गरे। त्यसपछि उनी फेसबुकबाट हराए। उज्वलले फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेको चौथो दिन २६ बैशाखमा ललितपुर प्रहरीले एउटा समाचार सम्प्रेषण गर्यो। त्यसमा भनिएको थियो, उनले आफ्नै सहोदर भाईकी श्रीमती अञ्जनाको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे।
समाचारमा थप भनिएको थियो, ‘उनी घटनामा प्रयोग भएको हतियार सहित प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।’ ललितपुर महानगरपालिका–२६ ढोलाहिटी बस्ने २५ वर्षीया अञ्जना लामा महतलाई उनकै जेठाजु उज्वलले हत्या गरेको स्वीकार गर्दै प्रहरीलाई बयान दिएपछि घटना उनकै केन्द्रीत भयाे। यतिबेला कर्तब्य ज्यान मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर चापागाउँस्थित प्रहरी वृत्तले उज्वलमाथी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
किन भयो हत्या? वृत्तले उज्वललाई म्याद थपका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतमा उभ्याएको थियो। उनले अदालतमा आफूलाई बुहारी अञ्जनाकाे रहनसहन, घर परिवारसँगको व्यवहार र आनीबानी चित्त नबुझेको बताए। अदालतले घटनाका बिषयमा साेधेकाे थियाे। उनले भएकाे सबै घटना खुलाए।
प्रहरी अनुसन्धानकाे पहिलाे काेण अञ्जनाको व्यवहारबाट उज्वल पहिलादेखि असन्तुष्ट रहेको छ। यही कारण बिहीबार भाई प्रज्वल र बुवा बाहिर भएको मौका पारेर बुहारी अञ्जनाको हत्या भएकाे हाे। घटनाको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले उनले दिएको प्रारम्भीक बयानसँगै अर्काे काेण समेत अनुसन्धान गरिरहेकाे छ। उसले हत्याकाे कारण हुनसक्ने बलियाे आधार घर धिताे राख्ने बिषय समेत मानेकाे छ।
प्रहरी अनुसन्धानमा मृत्तक अञ्जना र प्रज्वल स्थायी बसोबासका लागि क्यानाडा जाने तयारीमा रहेको खुलेको छ। यसका लागि सगाेलकाे घर धिताे राख्ने भन्ने बिषयमा परिवारमा विवाद थियाे। अनुसन्धान अधिकारीहरुले यो जानकारी हिरासतमा रहेका उज्वलसँग फरक कोणबाट सोध्न थाले। बिस्तारै उज्वल खुल्दै गएका छन्।
‘भाई बुहारी ललितपुरको सगोलको घर बैँकमा धितो राखेर क्यानडा जाने तयारीमा रहेछन्’ एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘हत्याको एउटा कारण यो पनि हो।’
अनुसन्धान अधिकारीहरुका अनुसार घर धितो राख्ने र बेच्ने बिषयले केही समयदेखि ढोलाहिटीको महत परिवारमा तनाव उत्पन्न हुन थालेको थियो। अफिस जान छाडेका उज्वल लामो समय घरमै हुन्थे। उनी आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण तनावमा पनि थिए। ‘हत्याको कारण पारिवारिक हो भन्ने खुलेको छ’ प्रहरी वृत्त चापागाउँका प्रमुख राजकुमार खिउजुले नेपालखबरसँग भने, ‘बयान लिने र थप प्रमाण संकलन गर्ने काममा हामी सक्रिय छौँ।’
अञ्जनाकाे भेजाईनल स्वाब परिक्षण : मृत्तक अञ्जना मोडल पनि हुन्। उनको सुन्दरताका कारण कतिपयले हत्याका पछाडि शारीरिक सम्बन्ध, जबर्जस्ती करणी र शारीरिक आकर्षण पनि हत्याको कारण हुनसक्ने आशंका गरेका छन्। ‘हत्याको कारण अहिलेसम्म पारिवारिक नै भन्ने खुलेको छ, अनुसन्धानबाट पनि त्यही देखिएको छ,’ डिएसपी खिउजुले भने, ‘हामीले मृत्तकको ‘भेजाईनल स्वाब’ समेत परिक्षणका लागि पठाएका छौँ।’
अञ्जना को हत्या भएको घटनास्थलका तस्वीरसमेत हेर्दा उनको हत्यामा उज्वलको क्रुरता कतिसम्म रहेछ भन्ने देखिन्छ। प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै भीडन्त वा त्यस्तो कुनै संकेत भेटेको छैन। ‘घटनास्थलको अध्ययन गर्दा कुनै घटनाका कारण रिसमा आएर एक्कासी खुकुरी प्रहार गरेको देखिन्न’ ती अनुसन्धान अधिकारीले भने ‘मृत्तक ढलेपछि पटक–पटक घाँटीमा खुकुरी प्रहार भएको छ।’
डिएसपी खिउजुका अनुसार, घटनास्थलमा भेटिएको हतियार र अन्य सबुत सहित स्वाब विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षणकै क्रममा छ। पाटन अस्पतालमा अञ्जनाको पोष्टमार्टम रिपोर्ट समेत आउन बाँकी छ। दीपक खरेलले नेपाल खबरमा लेखेको यो समाचार हामीले साभार गरेका हौ ।’